Iyini imithi ka-Akrikhin? Imfundo ekusetshenzisweni kokulungiswa, kanye nokubunjwa kwayo kanye nefomu ezokwenziwa, izocatshangelwa ngezansi. Futhi sizokutshela ukuthi lemali imbiza kangakanani, ukuthi ibonisa kanjani ukusebenza kwayo yokwelapha.
Ifomu lemithi, incazelo yalo, ukwakheka
"Akrihin" - amaphilisi (imiyalo yokusetshenziswa ehlelwe ngezansi) aphuzi, agcoke. Ingxenye yabo esebenzayo i-acrichine, futhi nezinye izinto ezisizayo zikhona ekwakheni.
Ulwazi oluyisisekelo ngomkhiqizo wokwelapha
U-Akrikhin usebenza kanjani? Imiyalo yokusetshenziswa (intengo yamaphilisi ehlelwe ngezansi) ithi imithi yokwenziwa komkhiqizo, okubonisa ukuthi yabiza izakhiwo zokubulala, izifo ze-antimalarial kanye nezase-schizontropic.
Omunye akanakusiza ukusho ukuthi ingxenye enkulu yalolu remedy ivame ukufakwa eminye imithi. Isibonelo, kaningi ema Pharmacy ungathola umuthi "Ibuprofen-Akrihin." Imfundo yokusetshenziswa ithi izimboni ezifana nezidakamizwa zisho izakhiwo zokulwa nokuvuvukala. Ngaphezu kwalokho, ngezifo zesikhumba, kungenziwa kunqunywe njenge-agent ye-hyposensitizing.
Yini ephawulekayo mayelana nomuthi Akrihin? Imiyalo yokusetshenziswa ikhombisa ukuthi le thuluzi cishe isuke isuka emgqeni wokugaya. Ngemuva kokuthatha amaphilisi emithonjeni eyabekwa udokotela, ukugxila okuphezulu kwe-plasma kubonakala ngemuva kwamahora amathathu. Ngesikhathi esifanayo, izinga lakhe eliphakeme ekusakazweni kwegazi lenziwa amahora amaningana.
I-Arachin idonswa ngezinso. Ngokwengxenye ithulwe ndawonye ne-bile. Kule nkinga, ku-gut 12 okuyi-duodenal le nto ingasetshenziswa futhi. Futhi kufanele kuthiwe ingxenye ethile yomkhiqizo ocatshangelwayo ibhujiswa ngqo emzimbeni.
Ngokomgomo wesenzo se-antimialarial, lesi sidakamizwa siseduze ne "Khingamin". Kodwa-ke, i- "Akrihin" ayisebenzeli kangako futhi ibangela ukubola kwe-mucous nesikhumba ephuzi. Ngesikhathi esifanayo, kufanele kuqashelwe ukuthi namuhla le remedy cishe ayisetshenziswanga njenge-agent ye-antimalarial. Ngokuvamile kunqunywe njengomuthi we-antihelminthic.
Endabeni yesifo sohudo, isiguli singabekwa umuthi okuthiwa iLoperamide-Akrihin. Imfundo yokusetshenziswa ikwazisa ukuthi le mithi ihlangabezana ngokushesha nomsebenzi wayo. Ngaphezu kwalokho, cishe akudingeki ukuba kuthuthukiswe ukusabela okubi.
Futhi kuma-pharmacy ungathola umuthi "Acyclovir-Akrihin" (amaphilisi). Imiyalo yokusetshenziswa ithi umuthi onjalo ulwa kahle ne-herpes virus.
Phakathi kwezinye izinto, izidakamizwa ezisekelwe ku-acrichine zingasetshenziswa ekwelapheni i-leishmaniasis kanye ne-lupus erythematosus.
Kungani umuthi we-Akrikhin udinga? Imfundo yokusetshenziswa iqinisekisa ukuthi le nsizakalo ilungele ukwelashwa nokuvimbela i-malaria (lesi sidakamizwa sonakalisa uhlobo lwe-asexual ye- plasmide ye- malaria).
Ngaphezu kwalokho, umuthi uvame ukusetshenziselwa njenge-photosensitizer esebenzayo (okungukuthi, ukunciphisa ubuzwe besikhumba emisebeni ye-ultraviolet) ekwelapheni izifo ze-erythematous (isib. Ku-lupus erythematosus, i-erythematous lupus erythematosus), kanye nama-photodermatoses ahlukahlukene.
Yini enye isilonda esinqunyiwe "Akrihin"? Imfundo yokusetshenziswa iqinisekisa ukuthi le remedy ikulungele ukuphatha ama-redheads.
Ku-psoriasis, lesi sidakamizwa sisebenza kuphela uma lesi sifo sisezingeni elimisiwe noma eliqhubekayo.
Inkambo yokwelashwa nomuthi osubuzwayo ihlala cishe izinsuku ezingu-10. Iphindwaphindwe izikhathi ezingu-4-6 ngezinsuku eziyisihlanu zokuphumula.
Kuziphi izimo ongeke ukwazi ukusebenzisa i- "Akrihin", "Ibuprofen-Akrihin", "Acyclovir-Akrihin" (amaphilisi)? Imiyalelo yokusetshenziswa ithi ukuphikisana nokusetshenziswa kwezidakamizwa kunjalo njengezifo zesifo neyesengqondo, ukwehluleka kwesibindi esikhulu, i-psyche engaqiniseki, ukuhluleka okukhulu kwe-renal. Ngakho kufanele uqaphele.
Ukulungiselela "Akrihin": imiyalo yokusetshenziswa
Intengo yalo muthi ingama-ruble angu-120 ngamaphilisi angu-30.
Ithuluzi kufanele lisetshenziswe kanjani? Yeka indlela izidakamizwa ze-antimalarial "Akrihin" ezithathwe ngayo ngemuva kokudla, zihlanjwe ngamanzi alula. Ngosuku lokuqala lokwelashwa, lesi sidakamizwa sinqunywe ku-0.3 g kabili ngosuku ngezikhathi zamahora angu-6. Ngosuku lwesibili, lwesithathu nolwesine, amaphilisi anqunywe u-0.3 g kwesinye isikhathi.
Ezifo ezinzima, ukwelashwa nge-Acrychin kungadlulela ngezinsuku ezingu-7.
Kufanele ngisebenzise kanjani iLoperamide-Akrihin? Imiyalelo yokusetshenziswa iqinisekisa ukuthi njenge-protivoglistnogo kusho, kanye ne-diarrhea, i-cestodiasis, uchungechunge lwamazinyo nokunye okunjalo, lesi sidakamizwa sinqunywe eminganisweni encike eminyakeni yobugulane:
Abantu abadala - ngo-0.8 g;
Kuzingane 3-4 iminyaka - ngo 0,15-0,2 g;
Izingane ezineminyaka engu-5-6 - 0.25-0.3 g;
Izingane ezineminyaka engu-7-9 - 0.35-0.4 g;
Ngomntwana oneminyaka engu-10-12 - 0.45-0.5 g;
Izinsana ezineminyaka engu-13-14 - 0.6 g ngayinye;
Izinsana ezineminyaka engu-15-16 - 0.7 amagremu ngamunye.
Ngaphambi kokuthatha le mithi, kusihlwa kanye nosuku ngalunye lwezokwelapha isiguli kufanele sidle isidlo esikhukhunjiwe nomkhawulo wamanoni, imikhiqizo enosawoti nebukhali. Futhi ebusuku ubulwelwe unqunywe i- laxative usawoti, futhi ekuseni bafaka i-enema, emva kwalokho banikeze umthamo wonke owenziwe "u-Akrihin" (esithombeni esingenalutho).
Endabeni ye-diphyllobothriasis ne-teniosis, ukwelashwa ne-ejenti okucatshangelwayo kwenziwa ngesikhathi esisodwa.
Ngesikhathi sokuguqulwa kwesifo, isiguli singase sibe nesicefe nokuhlanza. Kulesi simo, isiguli siboniswa ukuphumula kombhede, ukugwinya izingcezu ezincane zeqhwa kanye nomfudumalo, okufakwe esifundeni se-epigastric.
Lapho ukwelashwa kwe-giardiasis, lesi sidakamizwa sithathwa kathathu ngosuku ngesigamu sehora ngaphambi kokudla izinsuku ezingu-8. Izilinganiso eziphezulu zalesi sidakamizwa kubantu abadala kuleli cala yizi: nsuku zonke - 0.6 g, single - 0.3 g.
Uma kwenzeka i-lupus erythematosus, "Akrihin" inqunywe 0.1 g kathathu ngosuku izinsuku ezingu-10 ngokuphumula kwezinsuku ezingu-5-7 (izifundo ezingu-4-5 ngasinye).
Imithi "Acyclovir-Akrihin" kufanele isetshenziswe kanjani ne-herpes? Imiyalo yokusetshenziswa ibonisa ukuthi umthamo walesi sidakamizwa njenge-antiviral agent kufanele ukhethwe udokotela kuphela.
Njengomthetho, izidakamizwa "Akrihin" zibekezelela iziguli kahle kakhulu. Kulesi simo, umbala ophuzi wesikhumba, owaziwa uma uthatha imithi, awunabungozi ngokuphelele. Ngendlela, ingahlala amasonto ambalwa, kanye nesikhathi esithile ngemuva kokuphela kokwelashwa.
Uma kwenzeka le-agent esebenze ngokweqile, isiguli singase sithole imiphumela emibi elandelayo:
"U-Akrikhin ukudakwa," okungukuthi, ukukhulumisana nokukhushulwa kwezimoto ngokulahlekelwa ukuma, okuhlala amahora amaningana;
"I-Akrikhinovy Psychosis", ehambisana nalezi zindlela ezilandelayo: imibono nokukhohliswa, ukuthola umlinganiso weqiniso;
Ukucindezeleka noma injabulo (kufaka phakathi isimo sokucindezeleka), kanye nezinye izimo ezingapheli ngaphezu kwesonto.
Ngokuthuthukiswa kwezimpawu ze-neurologic, isidakamizwa esibucayi sikhanseliwe. Futhi, isiguli sinikezwa isiphuzo esinengi, ukuphuza kanye ne-glucose.
Ama-ejenti afanayo kanye nezilinganiso zomuthi
Imithi elandelayo ihlanganisa izidakamizwa ezilandelayo: Bigumal, Quinine dihydrochloride, Metakelfin, Delagil, ne-Hinocid.
Ngokuqondene nokufaniswa kuka-Akrihin, bafaka imithi enjenge-Atabrin, iMepakrina Hydrocloride, i-Athebrin, i-Hinakrin, i-Hemiokhin, i-Hepakrin, i-Malaricida, i-Italkhin, i-Mekaprin "," Metohin "," Mepakrin "," Palakrin "," Pentylene "," Paluzan "," Tenikridin ".
Ngokusho kochwepheshe, njengesidakamizwa se-anti-malaria, umuthi "Akrihin" awusetshenzisiwe kaningi. Kodwa-ke, kuvame ukusetshenziswa njengemithi ye-anthelminthic kanye ne-antiviral.
Ngokuqondene neziguli, zaneliseka ngemiphumela yokwelashwa no-Akrihin. Futhi, bayajabula kakhulu ngokuthi le mithi inezindleko eziphansi futhi inezilinganiso eziningi nezilinganiso eziningi.
Izimali eziphansi ezibandayo. An analog eshibhile yemithi ebandayo ebandayo
"Dioxydin" (amafutha): incazelo, ukubunjwa, imiyalelo yokusetshenziswa nokubuyekezwa
Ukuguquka kwezidakamizwa ezihlukahlukene
"Pharmatex" (amakhandlela) - izici zesicelo
Uphi umfula obanzi kakhulu emhlabeni?
Indlela hlola mthetho yezenzo ukubhaliswa maqondana izimoto?
Denis Klyaver: Biography futhi amaqiniso athakazelisayo zokuphila
Kuyini ukuhlakanipha, futhi nendlela yokuyithola
Yuri Khovanskiy: Life futhi Umsebenzi
Kristin Kreuk: i-biography, ifilimu nokuphila komuntu we-actress waseCanada
Iningi akuhambisani Zodiac izimpawu. Iningi akuhambisani ngesikhathi sokuzalwa komuntu zezinkanyezi
Izipho for Easter eyenziwa ngezandla nangamathuluzi kwamanye amaholide sekuthandwa.